१८ दिनदेखि अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा, किन मौन छ सरकार ?
Sunday, October 17, 2021 |आइतबार, असोज ३१, २०७८
जनतापाटी डेस्क सोमबार, जेठ ६, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले असक्षम भनेर अबकास दिएका अस्थायी शिक्षकहरु यतीबेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अस्थायी, करार शिक्षक संघर्ष समिति काठमाडौंको शान्ति बाटिकामा १८ दिनदेखि आमरण अनसन बस्दै आएका छन् ।
संघीय संसदकाे प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले अस्थायी शिक्षकको माग सुनुवाई नभएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको सुन्य समयमा बोल्दै सांसद उमेश श्रेष्ठले मुलुकभर ४६ हजार शिक्षक अभाव भए पनि सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई सडकमा आन्दोलन गर्न पठाएको आरोप लगाए । उनले विद्यालयमा शिक्षकविना विद्यार्थी पढ्न नपाउने स्थितीबाट मुक्त गराउन सरकारसंग माग गरे । उनले अस्थायी शिक्षकले गरेको आमरण अनसको विषयमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
सरकारले अवकाश दिएका कारण चार जना अस्थायी शिक्षकको हृदयघातले मृत्यु भएको दावी गरेका छन् । सरकारले अवकाश दिएपछि आफुहरुको रोजीरोटी नै खोसिएको उनीहरुको दुःखेसो छ । अनशनमा बसेको लामो समय बितिसक्दा पनि माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा कसैले चासो दिएको छैन । उनीहरुको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासंघबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ । तर ठोस निर्णय भने नभएको अस्थायी शिक्षक जीवन सुवाल बताउँछन् ।
आमरण अनशनमा बसेका कारण उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । आमरण अनशनमा पर्साकी नितु सिन्हा र जुम्लाकी राधा रावत बसेकी छिन् । सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई उपेक्षा गरेको र न्यायोचित व्यवहार नगरेको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले आफ्ना माग सम्वोधन नगरे जुनसुकै हदको आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत गर्न पछि नपर्ने आन्दोलनरत शिक्षक शान्ता गौडेलले चेतावनी दिएकी छिन् ।
वैशाख २० गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन शिक्षक सेवा आयोगले गत वर्ष नै परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजा समेत सार्वजनिक गरेको थियो । विगतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धि परीक्षामा सहभागी हुन नपाएकाका लागि फेरि परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उनीहरुले सरकारसँग गरेको अस्थायी शिक्षक कपलेश्वर मण्डलले बताए ।
राज्यले अस्थायी शिक्षकलाई उपेक्षित गरेको भन्दै ७७ वटै जिल्लाका अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । शिक्षक सेवा आयोगले स्थायीका लागि लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि विस्थापित नगर्नलगायतका माग राखी शान्तिवाटिकामा अनशन बसेका हुन् । अस्थायी शिक्षकलाई कुनै पनि बहानामा विस्थापित नगर्न र पुनः आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनअनुसार आन्तरिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका अस्थायी शिक्षकले स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था छ । अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकले अहिले रोजगारीको निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।अस्थायी तथा करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल बस्नेतका अनुसार परीक्षाका लागि फारम भरेका करिब २६ हजारमध्ये १२ हजारभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भएका छन् । उनले सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेको रोजगारीको हकको समेत उल्लंघन गरी शिक्षकलाई अवकाश दिएको आरोप लगाए ।
ऐनअनुसार परीक्षामा अनुत्तीर्ण शिक्षकले समेत ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ दिने व्यवस्था गरेको छ । बस्नेतले आफ्ना अनुभवलाई पैसामा किनबेच हुन नदिने बताए । संघर्ष समितिका सदस्य बिगु साहले नतिजामा समेत अनियमितता भएको आरोप लगाए ।
जनतापाटी डेस्कबाट थप
पहिलो पटक सरकारी कार्यालयनै ठगिको सिकार शुक्रबार, चैत ७, २०७६
चिनियाँ राष्ट्रपति सी’ले कसलाई भनेका रहेछन् ‘सैतान’ ? बिहीबार, चैत ६, २०७६
कोरोनाले जताततै तनाव : ऋण काढेर विदेश जानेको विचल्ली बिहीबार, फागुन २९, २०७६